Zone Forello Tanjombato ny orianasa Socolait. Tanjona ny hifampiseraserana amin’ny mpanjifa ary hampahafantarana ny vokatra rehetra. Tsiahivina fa orinasa miara-miasa amin’ireo mpiompy ao Vakinankaratra miisa 2.280 ity orinasa ity amin’izao fotoana ary mampiasa ny ronono velona zato isan-jato. Noho ny fiaraha-miasa amin’ireo tantsaha ireo dia mitombo hatrany ny vokatra ronono izay mahatratra 12.600 litatra isan’andro. Ao ihany koa ny fisian’ny fampiofanana ireo tantsaha ireo ka mahatonga hatrany ny fahaiza-manao. Ny antsasa-manilan’ny vokatra ronono ao Vakinankaratra amin’izao dia alain’ny orinasa Socolait ary misy fiantraikany amin’ny fidiram-bolan’ireo tantsaha.